Semalt Expert: Inona no vokatra azon'ny SEO ho an'ny mpandraharaha?
SEO dia ampahany manan-danja amin'ny tetikady ara-barotra, izay mamela fanombohanaary ny orinasa natsangana dia mampiroborobo ny tolotra sy ny vokatra. Ny fikarohana dia milaza fa 82% amin'ireo mpividy no manaiky ny vokatr'ireo valim-pikarohanakevitra, ary 70% amin'izy ireo no mividy vokatra miorina amin'ny valin'ny fikarohana. Noho izany, ny lafiny iray dia tena zava-dehibe amin'ny fandraharahana.
Jack Miller, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services dia manoritsoritra ny tombontsoa azon'ny SEO amin'ny mpandraharaha.
1 - advanced google analytics. Reputation management
Ny laza sy ny fahatsapana voalohany. Ny fitantanana reputation dia mikendryeo amin'ny fitondrana ao amin'ny lozisan'ny fikarohana. Noho izany, ny tanjona voalohany dia ny mametraka ny marikao amin'ny valin'ny fikarohana. Miaraka amin'ny tranonkalaNy fanatsarana, ny tambajotra sosialy dia manampy anao hanangana ny lazan'ny marika. Rehefa misy olona miditra ny anaran'ny marika hikarokahahitanao fampahalalana bebe kokoa momba izany, ny kaontin'ny tambajotra sosialy marikao dia ho lisitra ao amin'ny top 6 vokatra, noho izany, ny fanamafisana ny hafatra,izay tian'ity orinasa ity hanafaka. Ireo hevitra ireo dia mamela fahatsapana tsara amin'ny mpanjifa miantomboka.
2. Fikarohana lalindalina
Hiankina betsaka amin'ny paikady momba ny varotra sy ny fampiroboroboanaTeny fanalahidy ampiasaina ao amin'ny tranonkala. Manampy amin'ny fanatsarana ny tian'ny mpampiasa izany ary manatsara ny votoatin-tsoratra amin'ny tranokalan'ny bilaogy sy ny tranonkala.Ny fikarohana lalindalina ny teny fikarohana dia ahafahanao mamorona fampahafantarana ary manome fahafahana ny mpanjifa hianatra bebe kokoa momba ny vokatra na ny serivisy. Araka nyNy vokatra dia mahasambatra kokoa ny mpanjifa, ny votoatiny tsara kokoa ary ny laharana ambony, izay mitondra ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Nieli-patrana ny hevitra, vokatra ary serivisy, ary ny tabataba rehetraNy manodidina azy dia miteraka fikarohana tsaratsara kokoa, izay avy amin'ny rohy miditra, references ary famantarana ara-tsosialy. Mba hahazoana vola,Ny mpandraharaha dia tokony hamonjy ny fampivelarana ny orinasa ho amin'ny fampandrosoana maharitra..Ny fifamoivoizana organika no tena mampiavaka ny ankehitrinyary ny fivoaran'ny hoavy, izay manome valisoa lehibe ho an'ny orinasanao.
4. Mpandrindra Fanatanjahan-tena
Fanampiana SEO hanampy ny mpifaninana. Mila mpandraharahadia mametraka ny raharahany ivelan'ny fifaninanana ary miantoka fa ny elanelana misy eo aminy sy ireo mpilalao indostrialy hafa dia mampitombo bebe kokoa amin'nyfitadiavana fikarohana.
Ny famantarana ara-tsosialy dia mampiroborobo ny fiheverana avo lenta amin'ny fikarohan-karenafiara fitaterana mankany amin'ilay tranokala. Ny fantsom-pampahalalam-baovao sosialy dia manampy ity fitomboana ity, ary ilaina ho an'ny orinasa tsirairay. Mpandraharaha manohana azy ireony ezaka amin'ny media sosialy amin'ny fampielezan-kevitra SEO mahery.
6. Nahazo fitokisana
Nahazo fitokisana kely noho nyfanekena voafetra eo amin'ny tsena. Ny mpampiasa dia manana fitokisana bebe kokoa amin'ireo tranonkala izay mamaritra tsara ny teny fanalahidy tiany. Fikarohana fikaroana organikaManatsara ny kliokan'ny tranokala raha ampitahaina amin'ny valin'ny fikarohana. Ny lozam-pifidianana ambony amin'ireo fitaovana ireo dia manampy ireo orinasa vaovao hiorina eo an-tamponyamin'ny tsena eo imason'ireo mpihaino azy.
7. Long Term Brand Adjustment
Mitaky ny SEO ny fametrahana ny marim-pototra efa elatoy ny tetikady amin'ny fampiroboroboana ny hetsika an-tserasera amin'ny mpandraharaha. Ny dolara rehetra mandany amin'ny SEO dia midika amin'ny lanjany amin'ny làla maharitra.
SEO dia asa mandany fotoana, izay mitaky ny ankamaroan'nyharena. Na izany aza, dia marketing ara-nomerika tena tsara koa izy io izay miasa ho toy ny fampiasam-bola stratejika mandritra ny fotoana maharitra. Araka ny Semalt dia nanaporofo ny mpanjifa fa ny SEO dia manampy ireo mpandraharaha manomboka manomboka manomboka ny orinasany, manangana ny fahamendrehana sy ny fitokisana, ny vola azo antoka, ary ny fiantohana maharitra.